बाल मनोवैज्ञानिक कथा : बिहेको त्रास – MySansar
बाल मनोवैज्ञानिक कथा : बिहेको त्रास
Posted on March 10, 2018 March 11, 2018 by mysansar
अँ म त भगुसँगै बिहे गर्ने हो साह्रै मन पर्‍यो भन्दै झन् गफ गर्न मच्चिइन् उनी (मेरो नाम भगवान भए पनि मामाघरमा सबैले भगु भन्नुहुन्थ्यो)। मलाई भने यत्री ठूली केटीले म जस्तो सानो केटासँग किन बिहे गर्छु भनेकी होली भनेर मनमनै चिन्ता पर्न थालेको थियो। उसको उमेर त्यस्तै सोह्र सत्र थियो होला म भने ११/१२ को त्यै पनि अलिक होचै थिएँ। उसले माया गरेर दिएका पाकेका बेलौती पनि मलाई फकाउन दिएजस्तो लाग्न थाल्यो। मलाई त साँचै उसले मसँग नै बिहे नगरी नछाड्ने भइ भने कसरी उसलाई दुलही बनाउने होला,दुलही भएपछि के गर्नु पर्ने हो भन्ने पनि थाहा नभएको त्यो उमेरमा एक्कासी आइलागेको यो टेन्सनले म भित्रभित्रै उकुसमुकुस भैरहेको थिएँ। म उसलाई बिहे गर्दिन भन्न सकिरहेको थिइनँ र भनिहाले पनि मेरो कुरा सुनिदिने कोही थिएन त्यहाँ। दुइटी मावल्नी दिदीहरुले झन् उल्टै उसलाई उक्साउँदै ए तिमी त हाम्री भाइ बुहारी बन्ने नै हौ त, अलिक मिठो मिठो खान देऊ है हाम्रो भाइलाई भन्दै मच्चाइरहनु हुन्थ्यो। घरबाट मसँग साथैमा गएकी मेरी सहोदर दिदी भने खासै त्यति धेरै बोल्नु भएको थिएन किनकि दिदीको लागि पनि त्यो ठाउँ नौलो र तिनी मैयाँ अलिक नौलै थिइन्। तर पनि दिदीले यो सानै छ यसको बिहे गर्ने बेलै भएको छैन भनिदिए हुन्थ्यो नि जस्तो चाहिं लाग्थ्यो। शायद दिदीलाई यिनीहरुले मजाक गरेको भन्ने लागेर पनि होला मेरो पक्ष लिएर बोल्नुभएको थिएन र जरुरत पनि नपरेर होला। हामी दिदीभाइभन्दा पनि साथी जस्तै थियौं। त्यतिबेलासम्म हामी दिदीलाई नामले नै बोलाउँथ्यौं तपाइँ हजुर भन्दैनथ्यौं तँ नै भनेर सम्बोधन गर्थ्यौं, दिदीको बिहे भएपछि मात्रै निकै संकोच र लाज मानी मानी दिदी भन्न बानी पारेका थियौं।
दशैंको रमझम चलिरहेको बेला थियो, म आफै हिंडेर पुग्न सक्ने भएपछि पहिलो चोटी दिदीसँग मामाघर दशैंको टिका लगाउन जाँदै थिएँ। घरबाट हिंडेदेखि नै हरेक कुरा नौलो लागिरहेको थियो। दिदी भने त्यस अगाडि नै धेरै चोटी हिंडेको लेबाटो बिराउने सम्भावना थिएन। रामपुरको रातमाटादेखि दक्षिणतर्फको खेतको बाटो हिंड्दै गर्दा एक जना महिला भेटिइन्। उनी पनि त्यतै अल्कीचौरतिर टीका लगाउन जाँदै रहिछिन्। तर उनी एकोहोरो बोल्दै थिइन्। हामी बोलेको जवाफ नदिएर एकोहोरो बोल्दा कतै बहुलाई त हैनन् भनेर हामी दिदीभाई खासखुस गर्‍यौँ। पछि उनैले कुरा खोल्दै आफू जत्ति चर्को र कानैमा बोले पनि कत्ति पनि कान नसुन्ने बताइन् र एकोहोरो आफ्नो बारेमा सबै कुरा भनिन्। हामीलाई पनि कहाँ जाने हो भनेर एक दुई ओटा ठाउँ रोमन्दी,माझकोट,लाम्दी खोला आदिको नाउँ लिइन्। तर हामीले हैन भन्ने संकेतसूचक टाउको हल्लायौं र अन्त्यमा अर्खलडांडाको नाम लिंदा मात्रै हो भन्ने कुरा सूचित गर्यौँ। कानले नसुने पनि उनले हाम्रो कुरा बुझिन्। उनीसँग केहीबेर हिँड्यौँ अनि उनलाई उछिनेर अघि बढेपछि केहीबेर मा बाहुन डाँडाको उकालो सुरु हुन्थ्यो।
असिनपसिन हुँदै उकालो चढे पनि त्यहाँ बाट देखिने सुन्दर चापाकोट र रामपुर फाँट अनि बीच बाट बग्ने काली गण्डकी को मनोरम दृश्य ले मन लोभ्याएकोले खासै थकान को महसुस हुन्नथ्यो। बरु त्यहीं बाट काली गण्डकी को बिचमा अलिकति जंगल र दुइ तिरबाट काली बगेको देखियो ,अनि दिदीले नै त्यो देखाउंदै त्यहाँ पहिले सत्य युगमा काली गण्डकी बग्दै आउँदा नदीको बाटोमै अगाडी एउटी गाइ ब्याएर बाच्छी पाएको देखेर नदीले त्यो ठाउँ गाइको लागि सुरक्षित छाडेर दुइतिर बाट बग्दै गएको ले त्यस्तो भएको बताउनु भयो। दिदीले त्यसो भनेपछि त म झन् उत्सुक भएर रोकिएरै हेरिरहें। तर लामो बाटो अझै धेरै नै बाँकी रहेकोले दिदीले छिटो हिँड नत्र अँध्यारो हुन्छ भन्नुभयो र फेरी फटाफट उकालो लाग्यौं। अलिक माथि नै सिलुवा तिर पुग्ने बेला मा भने हामि बाटोमा फलेको टिमुर समेत टिप्थ्यौं र खल्तीमा हाल्थ्यौ। त्यहीं सल्लो को बोट पनि देखें अचम्म लाग्यो, पहिलो चोटी सिन्का जस्तो पात हुने सल्लोको बोट देख्दा।
स्कुलमा किताब पढ्दा चित्रमा देखेको सल्लोको बोट आज साँचै देख्दा नौलो लागेर म हाँगा भाच्न जान खोजेको दिदीले हुँदैन भिरमा जान भनेर रोक्नु भयो। तिन ताक नचिनेको कोहि मान्छे हाम्रो अघि पछि गर्यो भने पनि संका र डर लाग्थ्यो कतै चोर पो हो कि या हामीलाई कुट्ने पो हो कि या कोहि बौलाह पो हो कि झैं लाग्थ्यो। किनकि उबेला कहीं बाटो हिंड्दा आफूभन्दा ठुला कोहि नचिनेको मान्छे ले बच्चा भनेपछि नानाथरी कुरा गरेर डर देखाउने,तर्साउने आदि गर्थे। त्यस्तै मा एक जना महिला भेटिइन उनी कहिले हाम्रो अगाडि कहिले पछाडि हुन्थिन। हेर्दा अलिक जवानी गैसकेको जस्ती, कुर्ता सलवार लगाएकी, अनुहारमा कुनै आकर्षण नभएकी, गरगहना पनि नलगाएकि बिधवा जस्ती भेष देखिन्थ्यो। उनीसँग आँखा जुध्धा केहि संकोच र डर महसुस हुन्थ्यो हामि दुवै दिदीभाई लाइ। सिलुवा काटेर माझकोट को ओरालो झर्ने बेलामा त्यहाँ खल्लुक को ठुलो रुख थियो र पाकेका केहि फल भुई भरि थियो दिदीलाई थाहा रहेछ त्यो खाने चिज हो भन्ने अनि टिप्न थाल्नुभो त्यति नै बेला ति महिला ले हाम्रो परिचय सोधिन कहाँ जाने र कहाँ बाट आएको भन्ने जस्ता प्रश्न हरुले। दिदीले ले नै सबै कुरा बताउनु भयो र उनले पनि आफु मामाघर टिका लगाउन हिंडेको र अलि अलि हाम्रो नाता पर्ने बताइन अनि बल्ल हामि दिदीभाई को उनिदेखी को संकोच र डर हरायो र ढुक्क भयौं। पछि पो घर फर्केर आमासँग उनको हुलिया बताएर सोद्धा उनि पंगेनी कै भान्जी रहेछिन र बाल बिधवा भएकी रहिछिन त्यसैले पो त्यस्तो पहिरन मा भेटिएकी। उनलाई घिमिरेनी सेती भन्ने गरेको र त्यतै रामपुर तिर कुनै संस्था मा जागिर गर्ने कुरा पनि आमाले बताउनु भयो। यसरि हामि त्यहाँ बाट ओरालो झरेर बेलुका घाम अस्ताउने बेला तिर घुमाउने खोला मा पुग्दा भने निकै डर लाग्यो त्यहाँ मरेका मान्छे पुर्ने ठाउँ र निकै निर्जन ठुलो बगैंचा पनि थियो , त्यो काटेर खोला तरेर केहि उकालो हिंडेपछि मात्रै हाम्रो मामाघर आउंथ्यो।
डांडाघर को पँधेरो नजिकै पुग्दा त्यहाँ खरक कान्छी बोइ पानि लिन आउनुभएको रहेछ। त्यहीं झुम्म रुखै रुखले ढाकिएको छहारी र त्यो मुनि पँधेरो रहेछ। त्यहाँ भुईंभरि कटुस को फल हरु देखिन्थ्यो। कटुस को भित्रको फल खाएपनि बाहिर को बोक्रा सहित को त्यो फल र बोट पहिलो चोटी देखेको थिएँ त्यो पनि मेरो लागि नौलै थियो। बोइलाइ ढोगभेट गरेर अलि अलि कटुस टिप्दै बोइ संगै उकालो लाग्यौं। मामाघर पुग्दा घरमा हजुरबुबा र दुइ दिदीहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो। हजुरामा मामा माइजु लगाएत मामाको अरु परिवार मधेश मै हुनुहुन्थ्यो। मामाघर मा माया गर्ने हजुरामा नहुँदा साह्रै खल्लो र नरमाइलो हुँदो रहेछ तर पनि दिदीहरु भएकोले त्यति साह्रो भएन। त्यो दिन टिकाटालो गर्न कान्छो हजुरबा र साइँलो हजुरबा को घर अनि अरु यता उति र खानपान आदि गर्दैमा बितिहाल्यो , भोलि पल्ट पनि बस्यौं हामि। तिन ताक मान्छे ले दुइ तिर बाट ठेलेर मुर्रा घुमाएर रस निकालिने उखुं पेल्ने कोल चल्ती मा थियो, हाम्रा लागि त्यो कोल नौलो नभएपनि उखु समेत खाने सुरले उंखू पेलेको हेर्न गयौं र साइँलो हजुरबा को घर मा प्रसस्त उंखू खायौं। मामाघर का दुइटी दिदि,मेरो घर को दिदि र म बाहेक हाम्रो ग्रुपमा अर्की एक जना दिदीहरुको साथि पनि थपीइन जसले त्यो दिन मसंग बिहे गर्छु भनेकी थीइन। त्यस दिन दिदीहरु संग हामि धेरै ठाउँ घुम्यौं कोल भन्ज्यांग, खरक ,गैर्हा आदि। साथमा दिदिहरुकै साथि तिनै मैया पनि र प्रायः त्यतिबेला उंखू र बेलौती लगाएत का फलफुल प्रसस्त थिए। जतासुकै ति फलफुल खाँदै अनेक तरहका गफ गर्दै हिड्यौं। म त खास बोल्दैनथे दिदीहरु को गफ सुन्ने मात्रै हुन्थ्यो। त्यसै पनि कम बोल्ने मान्छे म त्यसमाथि नौलो ठाउँ र मन मिल्ने मान्छे नभएको अवस्था।
त्यो गाउँमा प्रसस्तै बेलौतिका बोट भएको र जताततै पाकेको बेला भएकोले हामि बेलौती खान पाखो तिर गएका थियौं। तर उनले त्यसरी खुलेआम मसंग बिहे गर्छु भनेपछि न त पाकेका बेलौतिमा रुचि भयो न त मामाघर गएको मा खुशी नै। बरु मामाघर नआएको भए हुन्थ्यो भने झैं भयो। कम से कम मामाघर नआएको भए यो केटि संग बिहे गर्न त पर्दैनथ्यो भनेझैं भयो मनमा एक्लो र उदास महसुस भैरहेको थियो र नाना तरहका कुरा हरु खेलिरहेको थियो। मामाघर दशैंको टिका लगाउन गएको म बिहे गरेर दुलही लिएर घर जाँदा के भन्ने हुन् भन्ने डर भन्दा पनि लाज बढी लागेको थियो, त्यसमाथि आफु समानको उमेरकी नभएर ठुली केटि। उनि तरुनी र सबैकुरा बुझ्ने भैसकेकी थीइन। स्कुले ड्रेस आकाशे शर्ट र निलो मिडि (फ्रक) मा थिइन उनि। छाती पुस्ट भैसकेका थिए ,अग्ली र राम्री पनि थीइन अनि अलिक ज्यान परेकी पनि। हाम्रा अरु दिदि हरु भन्दा उनि अलिक बढी नै बोल्ने गर्थिन। मनमनै सोच्थें कि हाम्रातिर त बिहे गर्ने कुरा गर्दा मात्रै पनि केटीहरु रुन्थे या झगडा गर्थे र यदि बिहे नै छिनेको छ भने झन् घर बाट बिरलै बाहिर निस्कन्थे तर यो त केटि मान्छे भएर पनि बिहे गर्छु भन्न कति लाज नलागेको होला। म आफुलाई भने अझै बच्चै सम्झन्थें र घरमा कहिले काहीं कसैले बिहे गर्ने कुरा गरेर जिस्क्याउदा समेत रुन्थें। सायद त्यहि उमेरको बच्चा हरु लाइ अचेल त्यसो भन्दा रुंदैनन ,बरु नपत्याएर हाँस्छन होला। खासमा उनीहरु त्यहींका भएकोले र अलिक ठुला भएकोले कुन रुख मा धेरै पाकेका बेलौती छन् र कसरि ति रुखमा चढ्ने सबै बानि परिसकेकाले मलाई बेलौती टिपेर दिने गरेका हुन्। सुरुमा त उनले दिएका पाकेका पहेला बेलौती मिठो मानि मानि खाएको थिएँ तर जब उनले मसंगै बिहे गर्ने कुरा गरिन अनि ति बेलौती मा मन गएन रिसाएर फाल्न पनि सकिन ,साथै मा जम्मा पारेर राखें। मनमनै उनले मसंग बिहे नगरी नछोड्ने भईन भने के गर्ने होला कसरि बिहे गर्ने होला ,कसरि दुलही मान्ने होला भन्ने कल्पनामा हराउन थालें र टोलाउन थालें। गाउँघर मा कसैकसैले केटि भगाएर ल्याएका घटना सम्झें र उनीहरुका घरकाले कसरि बिहे गरिदिन्थे र कसरि बस्थे ति कुराहरु सम्झें। अनि उनि यत्तिकै अहिले म घर फर्कंदा नै मसंग भागेर जाने होलिन कि घरमा भनेर सहमति मै बिहे गर्ने होलिन भन्ने कुरा पनि सोंच्न भ्याएँ त्यतिन्जेल। उनीहरु रुख रुख चाहर्दै हिंड्थे यता भने मेरो मनमा कत्रो भूइंचालो गैरहेको छ तिनीहरुलाई केहि वास्ता र मतलब थिएन तर पनि म चुपचाप उनीहरुका पछि पछि हिंड्थे। घरि घरि दिदीहरुले ए त्यसो भए त तिमीलाई हामीले बुहारी भन्नुपर्ने भो भन्दै उनलाई समेत जिस्क्याउन्दै हुनुहुन्थ्यो। उनि भने झन् मच्चिंदै मैले कति माया गरेर राख्छु मेरो बुढालाइ,मिठो मिठो खान दिन्छु भन्थिन।
त्यतिबेला मामा दिदि लगाएत तिनै जना दिदीहरुको कसैको पनि बिहे भएको थिएन दिदीहरुको उमेर र मेरोमा यस्तै चार पांच बर्ष भन्दा बढी को फरक थिएन। यता घरमा त ठुल्दाई को समेत बिहे भएको थिएन भने अरु दिदि र दाइको त झन् हुने कुरै भएन म बुबाआमा को सन्तान मध्येको चौथो रोलको साइँलो मा पर्थें। ठुल्दाई को सम्म बिहेको कुरा चल्दै गर्दा म बच्चो को बिहे गर्दा कुन हालत हुन्थ्यो म कल्पना पनि गर्न सक्दैनथें। खासमा मलाई बिहे गरेपछि कसरि पाल्ने,लाउन खान दिने भन्ने कुराको जिम्मेबारी को खासै बोध नभएकोले त्यो चिन्ता पनि थिएन। बिहे गरेर दुलही पाल्नुपर्ने कुराले चिन्ता परेको होइन मलाई। गाउँघर मा भित्रिएका बुहारी हरु का लोग्ने को कमाई नभएपनि सामान्य रुपमा घर बार चलेको देखेको थिएँ ,अहिले जस्तो कुनै कमाई नभई बिहे नगर्ने परिपाटी थिएन उबेला। त्यसैले पनि बिहे गरेपछि आफैले पाल्नुपर्ने जिम्मेबारी ले पनि त्यो चिन्ता लागेको हैन। यति सानैमा बिहे गर्दा दुनियाले के भन्लान भन्ने कुराले गर्दा सबैभन्दा बढी लाज लाग्ने समस्या थियो। बिहे गरेपछि दुनियाले जिस्क्याउँछन्,नानाथरी कुरा गर्छन घरमा बाआमा ले के भन्ने होला ,अनि छर छिमेक का साथि भाइ ले झन् कति जिस्क्याउँने हुन् त्यसमाथि स्कुल मा त झन् मुख देखाउन पनि सक्ने थिइन। मेरो स्कुल जान बाटो नै बन्द हुन् सक्थ्यो। बिहे गरेपछि खासै धेरैले पढेको देखिन्नथ्यो उतिबेला। त्यसै पनि घरमा दाजुभाइ र दिदीसंग कहिले काहीं येसो झगडा हुँदा एक अर्को मा आफ्नै क्लास का सहपाटी केटि साथि को नाम जोडेर बोलाउंने (नाम काढ्ने) र धेरै रिस उठाउने चलन थियो ऊबेला। त्यत्तिमै पनि रुने र पिट्न झगडा गर्न थाल्ने म बिहे नै गरेपछि त झन् के बाँकी रहन्थ्यो र ? त्यसरी नाम जोडिएका क्लास का केटि साथि हरु संग बोल्न पनि अफ्ट्यारो र लाज लाग्थ्यो स्कुल मा। कहिले काहीं आमाले काखमा लिएर टाउको सुम्सुम्याउन्दै मेरो काली कहिले ठुलो भएर दुलही ल्याएर मलाई सुख कटाउने होला भन्नुहुँदा त जुरुक्क आमाको काख बाट उठेर खुट्टा बजार्दै रुन्थें तर त्यहाँ त त्यस्तो घुर्की देखाएर रुने ठाउँ पनि थिएन।
यति हुँदा हुँदै दोमन दोधार र अन्योल मा पिङ्ग खेल्दा खेल्दै बेलुकी भैहाल्यो र हामी फर्कने तरखर गर्यौं अब के गर्लिन के भन्लिन भन्ने जिज्ञासा मनमा लागिरहँदै गर्दा ती मैया ले मायालु पाराले मेरो गाला चिमोटेर सबै संग बिदा भएर गईन उनि बिहेको बारेमा केहि नभनी बिदा भएर गएपनि भोलि बिहे गरेर संगै जाने हुन् कि हैनन् त्यो प्रस्ट भएको थिएन अथवा फेरी बिहेको कुरा गर्न आउँछिन कि आउँदिनन भनेर मेरो मन यत्तिकैमा शान्त भएन तर दिदीहरु संग उनले गरेको बिहेको कुरा सोध्न पनि सकिन। उनि गएपछि फेरी मैले आफै बिहेको कुरा कोट्याउंदा झन् दिदीहरुले ए तैंले पनि मन पराइस ? साँचै बिहे गर्ने नै हो , कुरा चलाम त भन्ने जस्ता जवाफ आउने पक्का भएकोले स्वयं त्यो कुराको निधो को लागि सोध्न सकिन। घर पुगेपछि पनि म नखुलेर बसेको देखेर दिदीहरुले नै कुरा उप्काउँदै तिमि लाइ त्यो केटिले बिहे गर्छु भनेर पिर मानेर नबोलेको हो कि क्याहो ? दिन भरि पनि बोलेनौ ठुस्स परेर हिंडी रह्यौ भन्दै बिचरा हाम्रो बालखा भगु भाइ लाइ अहिल्यै किन पो बिहे गर्न दिन्थ्यौं , त्यसले त जिस्क्याएको पो साँचै झैं मानेछौ तिमीले त, कति लाटो हाम्रो भाइ त्यत्ति कुरा पनि नबुझेर यत्रो बेर फुलेर बसेको ? दुलही पाल्न पर्यो भनेर डराएको हो कि क्याहो भन्नु भो। त्यसमा दिदीले पनि थप्दै यो त अलिक घोइरे छ एउटा कुरा चित्त बुझेन भने यस्तै हो जहिले पनि एकोहोरिएर बस्छ भन्नु भयो। अनि बल्ल दिदीहरु मात्रै भएको मौकामा मेरो वाक्य फुट्यो र उनले मसंग बिहे गर्ने कुराले नै त्यस्तो गरेको बताएँ ,अनि किन झन् तिमीहरुले समेत मलाई गिज्याएका र उसैलाई साथ् दिएका भनेर कराएँ पनि। दिदीहरुले साँचै हो त अनि ? जिस्क्याउन पनि नपाइने के भयो त ? जिस्क्याएर त्यो भोलि नै तिमीसंग जाँदिन क्यारे ,अब चुप्प लागेर खुशी भएर बस भन्नु भो अनि दिन भरि वर्षा याम को कालो बादल झैं धुम्मिएको मेरो मन बेलुका मात्रै खुलेर प्रफुल्ल भएको थियो र सामान्य अवस्था मा आएको थिएँ। बिहे गर्न नपर्ने र दुलही को कुरा सकिएको ले ठुलै दशा काटेको जस्तो मन हलुङ्गो भएको थियो र क्षण भरमै म फुरुंग हुँदै दिदीहरु संग गफ़्फ़िन थालेको थिएँ। धन्न दिदीले पनि घर मा आएर ति मैयाको बारेमा अरु कसैसंग र उनको नाम लिएर मलाई पनि केहि भन्नु भएन।
त्यसको धेरै वर्ष पछी एक चोटी हामी तनहुँ को यौटा गाउँमा आफन्त को घर गएका थियौं। निकै जाडो मङ्सिर को महिना चल्दै थियो। हामि पुरुष हरु जति बाहिर पिंढी मै गलैंचामा बसेर गफ गरिरहेका थियौं। यत्तिकैमा भित्र बाट हामीलाई चिया पुर्याउन को लागि एक किशोरी लाइ लगाइएको र उनि नाइँ जान्न भनेर ढिपी गरिरहेकी सुनियो। वास्तबमा त्यो उनको घर थिएन उनि आफन्त को त्यो घरमा बसेर दश क्लास पढ्दै रहेछिन। निकै कर गरेपछि बल्ल बल्ल उनि तिनोटा स्टिल को गिलासमा भरिएको चिया सहित को थाल लिएर आइन। उनि कुर्ता सलवार पहिरेकी तर पुरै मुख सहित उनि को पछ्यौरी ले ढाकेर अनुहार नै नदेखिने गरि आएकी थीइन। उनि यत्ति लजाएकी थिइन्र कि त्यो चिया पनि हाम्रो हातमा दिन नसकेर अलिक परै भुई मै राखेर जान लागिन ,तर मसंग गएको भिनाजुले किन लजाएकी नानि हामीले अहिले नै तिमीलाई दुलही बनाएर लैजाने हैन क्यारे यसरि मुख नै छोपिने गरि घुम्टो ओढ्नु पर्थेन त भन्नु भो। अनि त उनि झन् यत्ति लजाइन कि फरक्क पछाडी फर्केर एकै सासमा खुर्र भित्र कुंदिन। हामीले उनको केवल बुट्टे अम्रेला कुर्ता सलवार र उनिको पछ्यौरी बाहेक देख्न सकेनौ। भित्र हुने हरुले पनि यस्तो साह्रो लजाएर हुन्छ ? अर्काको घर जाने जात ? पराइको घर गएर घरपरिवार पाहुना पाछा सबैलाई रिझाएर खानु पर्ने जात यसरि त तिमीलाई हेर्न र बिहे गर्न कोहि पनि आउन्न है , कसैले खाने नै जास्तो त गर्नु पर्दैन त भनेर गाली समेत गरे। हामी त्यहाँ रहिन्जेल उनि भित्र बाट पटक्कै बाहिर निस्किनन। यसपाली भने म लजाएको थीइन। मेरो सट्टा पन्ध्र सोह्र वर्ष कि एक किशोरी हामि लाइ देखेर लाज ले पानि पानि भएकी थीइन। खासमा हामि त्यो घरमा मेरो बिहे गर्नको लागि केटि हेर्न गएका थियौं।
मैले नै यस्तो मुख नै देखाउन नसक्ने यस्तो अल्लारे केटी लाइ बिहे गरेर लगेर के होला, खै कसरि घरबार होला र जाउँ भो अब भनें र हामी दुइजना त्यो घरका संग बिदा भएर मुलबाटो मा निस्क्यौं। बिस्तारै रोकिंदै गफ गर्दै हिंडिरहेका हामि यसो गाईंगुईं सुनेर यसो पछाडी फर्केर हेरेको त तिन चार जना केटाकेटी सहित उनै मैया यौटा ठुलो काभ्रो को रुख को आडमा उभिएर हामीलाई हेर्दै रहेछन। जब हामीले फर्केर उनैलाई हेरेको थाहा पाइन् अनि त यत्ति लाज ले यत्ति पानी पानि भईन कि कहीं चोर्दा चोर्दै को अवस्था मा उनलाई कसैले रंगेहात पक्रेको छ। तुरुन्तै काभ्रोको रुख पछाडी लुकिन् उनि, हामी भने मरी मरी हाँस्यौं। अल्लारे मोरी निकै राम्री,चौडा निधार भएकी,गोरी सर्लक्क परेकी परि रहेछिन र पो त अघि आफ्नो रुप नदेखाएर बेहुली ले झैं ढाकेकी भनेर मनमनै दंग परें म। तर मुखले भिनाजु संग यत्ति मात्रै भनें कि केटि राम्रै रहिछ। अनि तेरो भिनाजुले जस्तो तस्तो केटि देखाउन लैजान्छ त भन्दै भिनाजु हाँस्नु भो। हामीले सम्झ्यौ कि उनको केटाकेटी पन अझै गएको रहेनछ ,अल्लारेपन बाँकी नै रहेछ किनकि उनि भर्खर पन्ध्र सोह्र वर्षकी थीइन त्यसमा पनि गाउँ मा हुर्केकी। जे होस् यसपाली भने म निकै रोमान्चित भैरहेको थिएँ कि आज बिहे गर्ने केटि हेर्न आउँदा यत्ति साह्रो लजाउने किशोरी भेट्न पाएकोमा। खासमा मेरो भिनाजु उनले पढ्ने स्कुल को शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा पनि नौ/दश क्लास को उनैको नेपाली शिक्षक जो मेरो लमी बनेर जानुभएको थियो। आफैलाई पढाउने सर ले कुनै केटा बिहे गर्नको लागि लिएर लमी बनेर आउँछ भने उनि मात्रै हैन अरु कुनै परिपक्क्व युवति भएपनि लजाउँथि होलि। बाटोमा हामीले यहि अनुमान गर्दै फर्क्यौं म मा भने केटि , बिहे ,श्रीमती आदि कुराले लाज र संकोच मान्ने अवस्था हराएर गएको थियो र बिहे गर्ने उमेर मा थिएँ यसपाली। अहिले कसैले मलाई तिमीसंग बिहे गर्छु भनेर जिस्क्याउने हिम्मत गर्दैनथ्यो किनकि म ठुलो भैसकेको र साँची बिहेको लागि योग्य र तैयारी अवस्थामा थिएँ।